ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေဒၚလာပြဲစားတစ္ခ်ိဳ႕ အဖမ္းခံရတယ္လို႔ သတင္းထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ ေဒၚလာေရာင္းဝယ္မႈ မရွိသေလာက္ျဖစ္ေန
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဒေါ်လာပွဲစားတစ်ချို့ အဖမ်းခံရတယ်လို့ သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန် ဒေါ်လာရောင်းဝယ်မှု မရှိသလောက်ဖြစ်နေ….
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဗဟိုဘဏ်က အမေရိကန်ဒေါ်လာကို လက်ဝယ် မကိုင် ဆောင်နိုင်အောင်လို့ ကြေညာချက်တစ် ရပ်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ရန်ကုန်မြို့က နာမည်ကြီးဒေါ်လာပွဲစားတစ်ချို့ အဖမ်းခံရတယ် လို့ သတင်း တွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်၊ အဲဒီသတင်းထွက်ပေါ်လာတာနဲ့
တပြိုင်နက်တည်း မှာပဲ ဒေါ်လာအရောင်းအဝယ်မရှိ သလောက်ဖြစ်သွားတယ်လို့ ဒေါ်လာ အရောင်းအဝယ်လုပ်နေသူတစ်ဦးက အခုလိုပြောပါတယ်။ “ ဒေါ်လာရဲ့ ပေါက်ဈေးမငြိမ်တော့ဘူးပရမ်းပတာပုံစံဖြစ်သွားတယ်၊ Money Changer တွေမှာအရောင်းအဝယ် အတော်လေး
ဆိုင်းသွားတယ်။ ဒေါ်လာ ပွဲစားအကြီးတွေကိုလည်း အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး(စစစ) ညွှန်ချုပ် ကိုယ်တိုင်ဖမ်းတယ် လို့လည်းကြားတယ်။ စင်ကာပူဘက်မှာ ဟွန်ဒီတွေ ရပ်ထားတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။ ဗဟိုဘဏ်က ထုတ်ပြန်နေတဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကြေညာချက်တွေကြောင့်
နိုင်ငံအတွင်းငွေကြေးစီးဆင်းမှုကို ထိခိုက်စေတယ်လို့လည်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ ဒေါ်လာနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ရွှေလည်း ခေါ်ဈေးအနည်းငယ်ကျသွားပေမဲ့ အရောင်းအဝယ်မရှိသလောက် ဖြစ်နေပါတယ်။
မွနျမာနိုငျငံအတှငျး ဒေါျလာပှဲစားတစျခြို့ အဖမျးခံရတယျလို့ သတငျးထှကျပေါျခဲ့ပွီး ရနျကုနျ ဒေါျလာရောငျးဝယျမှု မရှိသလောကျဖွစျနေ….
မွနျမာနိုငျငံအတှငျး ဗဟိုဘဏျက အမရေိကနျဒေါျလာကို လကျဝယျ မကိုငျ ဆောငျနိုငျအောငျလို့ ကွညောခကြျတစျ ရပျကို ထုတျပွနျခဲ့ပွီး နောကျပိုငျးမှာ ရနျကုနျမွို့က နာမညျကွီးဒေါျလာပှဲစားတစျခြို့ အဖမျးခံရတယျ လို့ သတငျး တှထှေကျပေါျလာပါတယျ၊ အဲဒီသတငျးထှကျပေါျလာတာနဲ့
တပွိုငျနကျတညျး မှာပဲ ဒေါျလာအရောငျးအဝယျမရှိ သလောကျဖွစျသှားတယျလို့ ဒေါျလာ အရောငျးအဝယျလုပျနသေူတစျဦးက အခုလိုပွောပါတယျ။ “ ဒေါျလာရဲ့ ပေါကျဈေးမငွိမျတော့ဘူးပရမျးပတာပုံစံဖွစျသှားတယျ၊ Money Changer တှမှောအရောငျးအဝယျ အတောျလေး
ဆိုငျးသှားတယျ။ ဒေါျလာ ပှဲစားအကွီးတှကေိုလညျး အထူးစုံစမျးစစျဆေးရေး(စစစ) ညှှနျခြုပျ ကိုယျတိုငျဖမျးတယျ လို့လညျးကွားတယျ။ စငျကာပူဘကျမှာ ဟှနျဒီတှေ ရပျထားတယျ” လို့ ပွောပါတယျ။ ဗဟိုဘဏျက ထုတျပွနျနတေဲ့ ငှကွေေးဆိုငျရာ ကွညောခကြျတှကွေောငျ့
နိုငျငံအတှငျးငှကွေေးစီးဆငျးမှုကို ထိခိုကျစတေယျလို့လညျး စီးပှားရေး လုပျငနျးရှငျတှမှေတျခကြျပွုပါတယျ။ ဒေါျလာနဲ့ ဆကျစပျနတေဲ့ ရှှလေညျး ခေါျဈေးအနညျးငယျကသြှားပမေဲ့ အရောငျးအဝယျမရှိသလောကျ ဖွစျနပေါတယျ။